Puntland iyo Somaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay Afduubkii Ceerigaabo ka dhacay | maakhir.com
Puntland iyo Somaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay Afduubkii Ceerigaabo ka dhacay
February 14, 2008 in Somalia
Ceerigaabo:- Labada Maamul ee Golufka wayn ee Colaadu ka dhex aloosan tahay Waa Somaliland iyo Puntland ayaa midba kan kale dusha uga tuurayaa inay ka danbeeyeen Falkii Afduubka ahaa ee ka dhacay Xarunta Gobolka Sanaag ee Ceerigaabo, Halka Somaliland sheegayo inay raga wax Afduubay ka soo duuleen Deegaanada Puntland.
Maamulka Somalialand ayaa dusha uga ridaya Kan Puntland iyaga oo sheegay inay ka danbeeyeen Falkii Talaadadii ka dhacay Magaalada Ceerigaabo ee lagu Qafaashay Sarakaal u shaqayn jiray Hay”adda Sama fal ah.
Wasiirka arimaha gudaha ee Maamulka Somaliland C/laahi Ismaaciil Ciiro ayaa war baahinta ka sheegay inay ragii falkii Ceerigaabo ka dhacay ka danbeeyay ay ka soo kicitimeen dhanka Puntland siiba isaga oo farta ku qaloociyay Magaalooyinka Bosaaso iyo Garoowe.
Mr Ciiro ayaa sidoo kale tibaaxay inay xidhiidh toosa leeyihiin Afduubyadii ka dhacay Bosaasoo iyo kan ka dhacay Gudaha Magaalada Ceerigaabo,waxa uu ku cel celiyay in Falkaas si toosa looga soo Abaabulay Deeganada Maamulka Puntland.
Hadaba dhanka Maamulka Puntland ayaa waxa u hadlay La taliyaha Madaxwaynaha arimaha Saxaafada Bile Maxamu”d Qabawsade isaga oo si kulul uga jawaabay Hadalkaasi ka soo yeedhay Maamulka Puntland.
Qaboowsade ayaa Farta ku fiiqay in hadlkaasi ka soo yeedhay Xukuumada Somaliland uu yahay mid aan sal iyo raatoona lahayn, ayana raga falkaasi Afduubka ahi ka danbeeyay ay u dhasheen Magaalada Hargaysa ee Xarunta Somaliland.
Bile Qabawsade waxa uu sheegay in xitaa Afduubyadii dhawaan ka dhacay gudaha Magaalada Bosaaso laf tigooda laga soo maleegay Magaalooyinka Burco iyo Hargaysa kuwaasi oo uu sheegay inay hayaan cadaymo muujinaya arinkaasi waa sida uu Hadalka u dhigaye.
Labadan Maamul ee Somaliland iyo Puntland ayaa waxa tan iyo markii ay dhacday Dawladii dhex ee ka ariminjirtay Dalka Somaliya waxa soo kala dhex galay Colaad baahsan iyaga oo markatsa ay colaadood salka ku haysay arimo la xidhiidha dhanka Xuduudaha.
Afduubkii maalintii Talaadaha ahayd ka dhacay magaalada Ceerigaabo ee xarunta Gobolka Sanaag ayaa waxa gaystay ilaa 7- ruux oo hubaysan kuwaasi oo khasab gaadhiga kaga dejiyay Ninkaasi ay qafaasheen halka uu dhaawacna soo gaadhay dareewalkii Gaadhigaasi.
Dhinca kale Daniel Bronkal oo ahaa ninkii la Afduubay ayaa waxa dadaal dheer u galay inay soo celiyaan odayaasha Deegaanka Sanaag kuwaasi oo ku guulaystay in Budhcadaasi laga soo fara maroojiyo.
Mr Daniel Bronkal ayaa maanta oo Khamiis ah ka dhoofay Gigida diyaaradaha ee magaalada Hargaysa waxana uu qabtay intaanu dhoofin ka hor shir jaraaid uu kaga war bixinayo xaaladiihii ugu danbeeyay ee soo food saaray,waxana uu sheegay inuu aad ugu mahad celino odayaasha Deegaanka Sanaag oo soo samata bixiyay.
« Maxaabiis ayaa ooda jiidhay Galabta Xabsiga Magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland
Madaxwayne Yuusuf oo Kulamo Gooni Gooni ah ka Bilaabay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Somaliya »